Nahoana no tsy mahay mihiboka? | Hevitra MPANOHARIANA |
Nahoana no tsy mahay mihiboka?
2021-05-09 @ 07:41 in Ankapobeny
Matetika no tsy takatry ny saranga antonony sy ny saranga ambony ny mahatonga ny olona, matetika ao amin'ny saranga ambany na mahantra sy fadiranovana, tsy mety mihiboka sady tsy hahay izany mihitsy?
Mety ho tezitra isika rehefa tsy mety manao izany ny hafa, satria heverintsika fa toy ny tsy misaina izy ireny, misy aza moa ny sasany lasa mahateny indray ny voambolana "andevo" izay efa tsy mendrika ny taonjato faha-21 intsony. Mihevitra isika fa be kiry amin'ny tsy antony ireny olona ireny, ary manao hadalana sady lasa mpitondra aretina ho afindra amin'ny hafa rahateo. Ny hany avaliko ny olona sy ny fitondram-panjakana dia izao: tsidiho ny tranon'ireny olona ireny, dia hevero amin'izay hoe ho tamana ve ny olona hipetraka ao amin'ny tranony?
Hevero hoe efitra iray no misy ny fatoriana sy ny fihinanan-kanina ary fandraisam-bahiny dia ny faharoa no misy ny fanokonan-kanina sy fitoeran'ireo kojakoja isan-karazany mbamin'ny fitafiana... raha manana efitra roa ry zareo? Dia vinanio hoe aiza ny fitoeran-kanina? Fa matetika ireny olona ireny efitra iray ihany dia ao daholo no asiana ny zava-drehetra, ary maromaro ny olona miara-mipetraka ao nefa ilay efitra kely velarana mety ho 10 metatra toradroa aza raha be indrindra. Ny maro amin'ireo olona ireo dia ny toerana fatoriana sy ny fahandroan-kanina ihany no tsy maintsy misy fa ny ankoatra izay efa "toy ny haitraitra".
Fehiny voalohany, natao hatoriana sy ialofana ihany ny trano fa any ivelan'ny trano no manao ny zavatra hafa rehetra... Fonja kely tsy isaziana ny tranon'ny ankamaroan'ny olona ary tsy misy zavatra azo atao loatra ao anatin'izany trano izany ka dia tsy ho tamana amin'ny fitoerana an-trano ny olona, hifampila vaniny ao ny iray trano rehefa miara-mirindrina tsy afa-mivoaka ao. Tsy manana aterineto, tsy manana fahitalavitra ary mety tsy hanana akory na dia radio aza ireny olona ireny. Honohono no iainany fa tsy mahafantatra ny tena zavamisy ry zareo ka tsy ho fantany mihitsy izany valanaretina sy Covid-19 izany na dia mety ho reny aza.
Manaraka izany, tsy haharaka na oviana na oviana amin'izay vola eo am-pelatanana ny fitsaboana fa izay takany ihany no ataony. Tsy hisy hiraharaha loatra izy ireny rehefa marary, indrindra moa rehefa ny vola takiana aminy no mitsena azy voalohany, ka any amin'izay azony atonina sisa no ihazakazahany. Ivelan'ny rafitra ara-dalàna hatrany anefa matetika ireny olona atoniny ireny. Koa hihiboka ve izy? tsy hisy mpahita na ho faty noana aza... tsy hihiboka? mahatezitra ny hafa mitandro ny fahasalamany.
Noho izany, tsy hahazaka ny fihibohana ry zareo na hisy na tsy hisy fanampiana avy amin'ny hafa satria ny toerana sy ny fonenana misy azy ireo mihitsy no tsy misy fanajana ny maha-olona sady tsy ho ahafahana manatanteraka ny "tsy fifampikasohana" (geste barrière). Tsy tokony ho maika tahaka ny sasany milaza fa natosiky ny mpanohitra sns ny zava-nitranga tany Antsirabe. Zavatra kely monja (mihidy amin'ny roa ora... mampihena ny ora fitadiavam-bola sy mampisy bebe kokoa ny fifampikasohana eny an-tsena noho ny fahateren'ny fotoana) dia mampipoaka ny fiaraha-monina raha atao be loatra ny teritery. Na izany na tsy izany, mila mitandrina hatrany ny rehetra fa mafy ny famelin'ny aretina rehefa kely ny herintsaina, herintsaina ananan'ireny olona heverina ho fadiranovana ireny be dia be.